Linux Mint 16 Petra ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ Linux မှ
Linux Mint 16 Petra ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | အကြံပြုပါသည်, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
သူတို့အခါတိုင်း ပိုပြီး အ အသုံးပြုသူများသည် ခင်ဗျားသိတဲ့ဒီဖြန့်ဖြူးမှု ချိုးပါ de Ubuntu ကို နှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းကိုယူ။ ဤတွင်စတင်အသုံးပြုသူများအတွက် post-installation လမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။
ဤအချက်များကိုရှင်းလင်းပြီးနောက် Linux Mint ဗားရှင်းအသစ်ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမည့်အရာအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်၍ စာရင်းပြုစုထားသည်။
2 ၂။ စီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းများကိုတပ်ဆင်ပါ (ဗီဒီယိုကဒ်၊ ကြိုးမဲ့စသည်)
7 ၇။ audio plugins များနှင့် equalizer တစ်ခုကို install လုပ်ပါ
8 Dropbox ကို Install လုပ်ပါ
10 ၁၀။ တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ပါ
၂။ စီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းများကိုတပ်ဆင်ပါ (ဗီဒီယိုကဒ်၊ ကြိုးမဲ့စသည်)
Menu Preferences> နောက်ထပ်ယာဉ်မောင်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ပြသနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအခြားစက်ပစ္စည်း၏စီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ ပြောင်းလဲ၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၇။ audio plugins များနှင့် equalizer တစ်ခုကို install လုပ်ပါ
၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည် Gstreamer သို့မဟုတ် Timidity တို့ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏အထောက်အပံ့ပုံစံများကိုတိုးချဲ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီလိမ့်မည်။ နှစ်ခုလုံးကို Programs manager တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်သို့မဟုတ် sudo apt-get install command ကို အသုံးပြု၍ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ Pulseaudio-equalizer ကိုတပ်ဆင်ရန်အကြံပြုသည်။ ၎င်းသည်အဆင့်မြင့် Pulse Audio ပြင်ဆင်မှုနှင့်အသံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ထည့်သွင်းရန်အတွက် (၃) ခုအသုံးပြုမည်။
Dropbox ကို Install လုပ်ပါ
"cloud" ခေတ်တွင်သင့်တွင် Dropbox သို့မဟုတ် Ubuntu One အကောင့်တစ်ခုရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ Program Manager မှ Ubuntu One နှင့် Dropbox ကိုသင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်သည် Dropbox ကိုအောက်ပါ command ဖြင့်သုံးနိုင်သည်။ sudo apt-get ထည့်သွင်းပါ.
La တရားဝင်အသုံးပြုသူလမ်းညွှန် Linux Mint ကိုစပိန်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုသည်သာမက၎င်းကိုစနစ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်အသုံးပြုခြင်းအတွက်အထူးအကြံပြုလိုသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အကြံပြုပါသည် » Linux Mint 16 Petra ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
မင်္ဂလာပါ။ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှစ်ခုစလုံးအကြားပရိုဂရမ်များနှင့်အစီအစဉ်များသည်အလွန်သဟဇာတဖြစ်သည်ဟုသင်ပြောသောအခါသင်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ဖြန့်ဖြူးမှုအားလုံးသည် GNU / Linux package များနှင့်သဟဇာတဖြစ်မည်မဟုတ်လော ငါဒီအချက်ကအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့သုံးစွဲသူများကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်တယ်လို့ထင်လို့ပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေငါဆောင်းပါးသည် Mint လောကသို့ ၀ င်ရောက်သူများအတွက်အလွန်ကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ Mint သည် Ubuntu ကိုအခြေခံသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲ၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်၎င်း၏ repositories ကိုသုံးသော်လည်း Mint တွင်မဟုတ်ဘဲ Ubuntu တွင် default အနေဖြင့်ထည့်သွင်းထားသော package တစ်ခုရှိနိုင်သည်။ ထည့်သွင်းလိုသည် သင်သိ, မှီခိုလိပ်။
သို့သော်ဖြေရှင်းမရနိုင်သည့်အရာနှင့် software အများစုအတွက်ပြmostနာမရှိပါ။
ပို့စ်အပေါ်ဂုဏ်ယူပါတယ်! အလွန်အသုံးဝင်သည်။ Mint သည်ကျနော့်အမြင်တွင် Ubuntu ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ထားသော်လည်းထိုသတင်းအချက်အလက်ကိုသိရှိရန်ဘယ်တော့မျှမနာပါ။
ဒါအမှန်ပဲ။ တက်စလာသော့ကိုနှိပ်ပါ။ 🙂
post ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီ Linux version mint မှာဘယ် desktop environment ကိုအကြံပေးချင်တာလဲ။
kinnamon သင့်မှာ GPU နဲ့ MATE ကောင်းရင်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိစ္စမှာ။
မွမ်းမံမှုများသည်စီမံခန့်ခွဲမှုမှအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ (system icon ၏တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန် Mint သည်အဆင့်မြှင့်တင်မှုအဆင့်ကိုသတ်မှတ်ထားပြီးသင့်အားအဆင့် ၃ အထိသာပုံမှန်အားဖြင့်သာ install လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ) အကယ်၍ သင်သည် console မှ update လုပ်ပါကသော့ဖိုင် system အချို့ကိုပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
Petra ဟာရွေးချယ်စရာကောင်းတဲ့ပုံပေါက်နေပုံရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြိုးစားဖို့ငါထင်လိမ့်မယ်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် Ubuntu 12.04 အသုံးပြုသူဖြစ်ပြီး Mint Petra KDE ကိုတပ်ဆင်ခဲ့သည်၊ ရက်အနည်းငယ်ကြိုးစားခဲ့ပြီးလက်ပ်တော့ကို format လုပ်ရန်နှင့် Mint တစ်ခုတည်းကိုသာစွန့်ရန်မတွန့်ဆုတ်ခဲ့ပါ၊ အရမ်းကြီးတယ်
နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်အလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ဤအလွန်ကောင်းသောဗားရှင်းအတွက်မည်မျှပံ့ပိုးမှုကျန်ရှိနေသည်နှင့် lts သည်မည်သည့်နေရာတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးရမည်ကိုမြင်လိုသည်။
Luis Marquez ကိုပြန်ပြောပါ
LM 16 ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊
ငါ linux mint 16 ကိုတပ်ဆင်ရန်ရက်သတ္တပတ်များစွာကြိုးစားနေသည်၊ သို့သော်တပ်ဆင်ခြင်းပြီးဆုံးသည့်အချိန်တွင်“ installer ပျက်ကျပြီ” ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုပြောသောဒဏ္withာရီနှင့်အမှားတစ်ခုရပြီး၎င်းကိုပြန်လည်စတင်သောအခါကျွန်ုပ်ကိုတားဆီးထားသော grub ကိုဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ ငါအခြား partition ၌ရှိသည် linux သို့မဟုတ် win2 နှင့်အတူစတင်ကနေ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကြိုးစားတိုင်းပျက်ကွက်တဲ့အခါငါ Dual Boot ပြန်ဆယ်တင်ဖို့ Ubuntu 13 ကို install ရတယ်။
Yumi ကိုအသုံးပြုပြီး mint ကို usb ဖြင့် install လုပ်ရန်နှင့် iso ကို DVD တစ်ခုသို့မီးထည့်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးရလဒ်မှာအတူတူဖြစ်သည်။ မနေ့က Lili ဖန်တီးသူပရိုဂရမ်ကိုဒီလိုမျိုး download လုပ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီ့နဲ့ iso ဖိုင်တွေပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ သင်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေကူးယူလျှင်ပင်။
linux mint ကိုကျွန်တော့် hp g42 လက်ပ်တော့မှာတပ်ချင်တယ်။
တရားဝင်ဆိုဒ်မှ iso ကိုကူးယူပြီးသည့်တိုင်သင်ဖိုင်များပျက်စီးသွားလျှင်၎င်းကိုအခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှ၎င်းကိုကူးယူ။ disk ထဲသို့ကူးထည့်နိုင်သလားစစ်ဆေးပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်သောအခါပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်အမှားများကိုရှောင်ရှားလိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ်သင်သိတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ကိုမင်းဆီမှာထားခဲ့ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင့်ထံဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါက၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ (တစ်ခုခုထူးဆန်းသည်) တွင်တစ်ခုခုနှင့်မကိုက်ညီဟုဆိုလိုသည်။
ယခုယေဘူယျမှတ်ချက် - ubuntu နှင့် mint နှစ်ခုလုံးသည်သုံးစွဲသူခွင့်ပြုချက်ပြသနာများရှိသည်၊ drives များသည်“ ထိုပိုင်ရှင်မဟုတ်” ဖြစ်သည်။ ရှင်းပြပါရစေ။ ကျွန်ုပ်သည် Linux ၏ mint“ window ဘေးတွင်” $$$ (system အတွက် partition C: data အတွက် data) အတွက်ကျွန်ုပ်ကို install လုပ်လျှင် system ကို၎င်း၏ "standard" permissions နှင့် administrator ဖြင့်အလိုအလျောက် login အသုံးပြုသူနှင့်အတူထားခဲ့လျှင် (စနစ်ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့်) ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းသည်သူသည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏စကားဝှက်ကိုတောင်းခံသောကြောင့် (D သည် "အခန်းကန့်ကို" D: ") ဝင်ခွင့်မပြုပါ။ အကြောင်းမှာသူကမည်သည့်အရာမျှမပျက်စီးစေရန်ကျွန်ုပ်ကိုပေးလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည်အကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာနှင့် D: အခန်းကန့်၏ခွင့်ပြုချက်များကိုပြောင်းလဲရန်နည်းလမ်းရှာမတွေ့ပါ။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက် mount မဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနည်းဆုံးသင်ဖွင့်ချင်သောအခါ၎င်းကို mount နိုင်သည်။ ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်စာရွက်စာတမ်းများကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖိုင်တွဲများတွင်သိမ်းဆည်းရန်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လျှင်ငါမကြိုက်ပါ။ ၀ င်းဒိုးမှ $$$ မှဒေတာသည်စက်ရုံများနှင့်အလှမ်းဝေးသည်ကိုကျွန်ုပ်သိခဲ့သည်။
ယခင်ကအသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီသည်သူတို့၏ခွင့်ပြုချက်များကိုပျက်ပြားခဲ့ပြီးအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အခုဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုရှိပါတယ်: "standard" နှင့် "administrator" ... အကယ်၍ ပုံမှန်သုံးစွဲသူသည် administrator ၏ password ကိုလိုအပ်လျှင် ... ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းပါသည်။
ဆာဗေးဒေါ၊ သင်သည် D သို့ဖြတ်လမ်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအစည်းအဝေးအတွင်းသင်၏စကားဝှက်ကိုထည့်ရမည်။ အဲဒီမှာသင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်း၏အသုံးပြုသူမှကွပ်မျက်ခွင့်ပြုချက်ပေး။ သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်
သင်၏အကောင့်မှဖြတ်လမ်းတစ်ခုကို ဖန်တီး၍ သင်၏အသုံးပြုသူအားကွပ်ကဲခွင့်ပြုချက်များကိုပေးနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ Ubuntu ရဲ့မူကွဲအားလုံးမှာပြforနာမရှိဘဲကျွန်တော်အတွက်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ linux mint အတွက်လူသစ်တစ်ယောက်ပါ၊ ကျွန်တော့်ကိုတပ်ဆင်လိုက်ပြီးဒီ post ကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်။ ငါစာမျက်နှာကိုစူးစမ်းလေ့လာရင်းအမှန်တရားကကျွန်တော့်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းပါ။
Gaston Barriga ဟုသူကပြောသည်
ဒီအလွန်အသုံးဝင်သောပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ် Linux အတွက်လေ့လာသူပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Lenovo 16 N3000 200 Laptop ဟောင်းမှာ Linux Mint 0769 ကိုထည့်ပြီးပါပြီ။ WiFi မှအပအရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုအလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူး ငါ driver manager ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ "proprietary driver" ကိုအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ပဲ "driver and devices စာရင်း" မရှိဘဲ window အလွတ်တစ်ခုတွေ့တယ်။ Revert and Apply Changes ခလုတ်များသည်မလှုပ်ရှားပါ။ ကြိုးမဲ့ Controller ကိုဘယ်လိုဖွင့်လို့ရမလဲ။ ငါမဆိုအကူအညီနဲ့တကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။
Gastòn Barriga အားပြန်ပြောပါ
သင်ဖော်ပြသည့်အရာမှ၎င်းကို Windows ၏ "လက်ဖြင့်" လုပ်ရန်လိုသည်။
၎င်းအတွက်သင် ndiswrapper ကိုသွင်းပြီးကဒ်၏ windows driver ကိုယူရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ထင်မြင်ချက်ပိုရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်၊ သင့်ကိုလင့်ခ်တစ်ခုချန်ထားတယ် (သင့်အခြေအနေမှာတော့ကွဲပြားခြားနားနိုင်တယ်):
ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုစတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကမှအခမဲ့သို့ချည်နှောင်ခြင်းကိုချိုးဖောက်သောငါတို့အတွက်အလွန်ကောင်းသောထည့် ၀ င်မှုသည်အလွန်ကြီးမားသည့်အထောက်အကူဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်သည်အသစ်ဖြစ်၏၊ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်မပါဘဲ Linux Mint ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်နေသည့်နေရာမရှိ၊ ယခုကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်သည်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည့်ဖော်ရွေသောအိမ်တစ်လုံးရရှိသည်၊ ၎င်းသည်အလိုအလျောက် update လုပ်သလားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လုပ်သင့်သလား။ ငါနှင့်အတူသည်းခံပါ၊ ငါဟာသင်ယူချင်တဲ့ ... ၈၂ နှစ်အရွယ်ရှိ Dummy တစ်ယောက်ပါ။
Abel Lopez အားပြန်ပြောပါ
package များကို linux mint 17.1 တွင်ထည့်သောအခါ repositories နှင့်ဆက်သွယ်မှုပျက်ကွက်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောပြသည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပရိသတ်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့် operating system များသည်သစ်ကြံပိုးခုံကိုသုံးနိုင်သည်၊ ၎င်းကိုပြုလုပ်သောအရာများနှင့်အထွေထွေသတင်းအချက်အလက်ကိုမည်သည့် operating systems များပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်ကိုသိလိုပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးချက်ချင်းပဲ
Jaime Antonio Avila ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် operating systems နှင့် pc နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံးအတွက်အသစ်တစ်ခုပါ။
mendaron, Linux Mint အကြောင်းကြည့်ပါ။
cd, ဒါမှမဟုတ်အဲဒါက audio system ဖြစ်ရင်သူတို့ကိုငါ drivers တွေနဲ့ပြုပြင်လို့ရမလား။
Jaime Antonio Avila အားစာပြန်ပါ
Acer လို linux mint 17 rebeca ကသော့တွေကိုအမြဲတောင်းလေ့မရှိပါဘူး
XMPP: ပွင့်လင်းပြီး universal ဆက်သွယ်မှု
jDirToText - သင်၏ဖိုင်များပို့ရန်